Ny fomba hitsena ny ankizivavy enina ambin'ny folo nihazakazaka soso-kevitra - "Fitiavana Soso-kevitra"
Ny fomba hitsena ny ankizivavy enina ambin’ny folo nihazakazaka soso-kevitra — «Fitiavana Soso-kevitra»
Ny mahita ny mpivady ao amin’ny tontolo maoderina dia tsy dia sarotra. Dia ilaina ihany ny fampiasana ny fahafahana. Ireo «Fitiavana Toro-hevitra», dia manampy mba hisarihana ny sain’ny hafahafa tovovavy sy hampitombo ny vintana raha ny fihaonana eo amin’ny tena fiainana, ary ny Internet. Tampoka fampidirana eo amin’ny fiainana andavanandro bebe kokoa tahaka ny tranainy. Na dia izany aza, io dia iray amin’ireo tantaram-pitiavana indrindra ny toe-javatra, izay avy eo dia afaka milaza ny zafikeliny. Izy ihany koa dia manana tombony maro hafa. Voalohany, ianao mahita foana ilay olona tena, tsy tsinjaraina ny sary taona lasa izay. Faharoa, afaka mampiasa ny ambony indrindra ny charme: indrisy, virtoaly ny fifandraisana dia mbola tsy fampitana rehetra ny mahay manavaka ny fiainana. Rehefa fihaonana eo amin’ny tena fiainana, fihetsika mitory fitiavana hampandraisana afaka milalao ao amin’ny famindram-po. Tsarovy momba ny manokatra ny toerana, miovaova (fa tsy be loatra) masony sy ny tso-tsiky. Izy ireo dia manao ny antsasaky ny asa: tsy maintsy olona tsy fantatra. Mahalala olon-kafa, izay manasa ny zazavavy mba hitondra lehibe valizy na manazava ny fomba matetika no mahatonga ny tsara fanahy. Fotsiny aza afangaro avy amin’ny fikirizana. Matetika ny «tsy misy» mbola midika hoe tsia, sy ny hoe mahery setra loatra fotsiny dia tsy hanampy anao hevitra. Izy no mandray ny metro sy mamaky Dostoevsky. Na izany t-shirt miaraka amin’ny sary ny Darth Vader. Eto ary vonona ny foto-kevitra voalohany resaka. Fa eto indray dia tokony hahatsiaro momba ny atsangana hitondra. Hevitra mikasika ny zavatra mahatonga ny zazavavy ny finday, na dia tsy hanidy ny varavarana lamba amin’ny tanana, dia mazava fa tsy mendrika izany. Izany sisin-tany momba ny fanafihana ny fiainana manokana. Raha toa ianao ka amin’ny concert na fampisehoana, ny tiany dia mety hifanandrify amin’ny tiany ny mahafatifaty vahiny sy ny resaka dia ho mora kokoa ny mahita. Saingy hanampy mety ho ny ankamaroan’ny olon-tsotra ny toerana: ny fivarotana, trano fisotroana kafe, fanaovana fanatanjahan-tena. Na dia ny trano fonenana-birao.
Mampiasa ny tontolo iainana ho fialan-tsiny mba hanombohana ny resaka. Anontanio, ohatra, inona no vokatra na ny lovia ny mifidy, ary nanamarika fa izy dia toy ny olona mijery izay azonao itokisana. Ifanakalozy hevitra ny mahay manavaka ny fiofanana na fiainana ao amin’ny faritra. Amin’ny Ankapobeny, ny fampiasana ny harena rehetra ny fiainana andavanandro any amin’ny ambony indrindra. Ny win-win, raha ny fiderana no tsy ahitana ny platitudes, fa tsy fanatsarana. Manadino ny momba clichés toy ny ranomasimbe ny maso sy ny riandrano ny volo. Fa tsy be loatra amin’ny tany am-boalohany: ny vaovao fa ilay tovovavy dia manana ny tsara indrindra sakan’ny ny rantsan-tanana na ny tonga lafatra ho curvature ny nify, raha ny Fiarahana no tsara be loatra. Avy amin’ny chic banga koa tsara indrindra ny tsy mety. Satria ny faharoa (fahatelo, fahefatra, sy ny sisa) ny andian-teny dia tsy maintsy mitovy ny virtuosity ‘ ny voalohany. Raha tsy izany dia ny ezaka rehetra dia hidina ny tatatra. Raha toa ianao ka tsy matoky ny miteny fahaiza-manao, fotsiny ary manaiky izay ankizivavy tiany, dia toa mahaliana anao. Fahadiovam-po niasa tsara kokoa noho ny na inona na inona ny miresaka. Olom-pantatra eo amin’ny tena fiainana, dia efa foana ny tsy nampoizina. Ary tampoka teo, ary tsy fantatra ny sisin-tany amin’ny loza. Mba ho tena mandanjalanja, mahalala fomba, ary tsy Stargates ny faritra manokana ny zazavavy iray. Raha tsy izany ny fihetseham-po fotsiny hanaitaitra azy sy ny hery haingana afa-mandositra. Na dia, raha ny sisa ny manao izany tsara. Ny tombony azo amin’ny tambajotra ara-tsosialy dia mazava: manome be dia be ny vaovao sy misy dikany kokoa ny dingana voalohany. Fa misy ny sasany fandrika. Miezaha mampihatra ny toro-hevitra manaraka ireto mba hahazo ny sain’ny tsara tarehy olon-kafa. Ny fomba tsotra indrindra mba hamely ny olom-pantatra sy ny mety hahita ny antoko misafidy araka ny tombontsoa. Vondrona, daholobe, ny zava-nitranga tao amin’ny tambajotra sosialy — hihaona mivantana any, na ny mifandray amin’ny zazavavy manokana. Tokotokony lisitry ny foto-kevitra tonga dia ho mora. Raha te-hihaona, mampiseho izany am-bava, ary tsy tacitly mba hameno ny zazavavy am-polony no tiany. Amin’ny tranga farany, dia azo inoana fa hanaiky ny tsy ampy na tsy matotra ny olona. Mamoaka firaketana an-tsoratra momba ny fisarahana vao haingana ny teo aloha. Lahatsoratra sary ny zavatra ny vehivavy rehetra dia alikavavy. Henjankenjana eo amin’ny fanehoan-kevitra. Dia tsy ho gaga ianao fa ny hafatra tsy nahazoam-baliny. Raha potoana dia ny mahalala fomba ny mpanjaka, ny fampianarana mamaky teny sy manoratra — avy amin’ny mpampiasa Aterineto. Ary mbola izany no voalohany ny porofo fa efa lasa ny faharanitan-tsaina. Ka miezaka ny tsy dia fototra fahadisoana. Raha miahiahy, hitady ny valiny ao amin’ny rakibolana na lohahevitra loharanon-karena. Raha toa ianao ka tsy matoky ny fahalalana ny teny rosiana, andramo ny manomboka mandalo fitsapana izany. Ny vokatra dia ambany ny eo ho eo dia midika fa ny fotoana mba borosy ny fitsipiky ny sekoly. Indray mipi-maso tetezamita «ianao» ny sasany dia toa maimaika. Fa sarotra ny manoratra «anao», sy ny amin’ny renivohitra taratasy, ary niara-manadala ankizilahy miaraka ny style-piandohan’ny taonjato faha XIX — tsy safidy tsara indrindra. Noho izany ianao dia haka bebe kokoa noho ny naphthalene ho hafahafa noho ny mahaliana sy ny olona ankehitriny. Toa mba hihaona amin’ny alalan’ny manokana toerana na ny tolotra mora kokoa, satria izy no vavy, tao fikarohana. Fa ny mety ny zanabolana, tsy misy latsaka. Mba hampitombo ny vintana, manaraka ireo torolalana. Te lehibe fifandraisana. Avy eo dia tsy lahatsoratra (na, fara fahakeliny, aza manao ny tena) ny sary ny tratra sy ny hafa hita faritra amin’ny vatana. Na dia manana saina-nitsoka cubes. Na dia ny fahotana mba hanafina izany hatsaran-tarehiny. Koa tsy ho kamo famenoana ny antsipirihany sy ny mombamomba diniho tsara ny amin’ny fizarana izay mamaritra ny zavatra mahaliana. Tsarovy: ny manokana bebe kokoa ny famaritana, ny vintana kokoa ny fivoriana ny olona tsara. Noho izany dia tsy mametra-tena ho generalities. Indrindra Mampiaraka toerana hanambara ny vaovao ny mpampiasa: izy ireo dia apetraka amin’ny voalohany fikarohana ny pejy na manokana fizarana izay azon’ny rehetra jerena. Vokatr’izany, beginners (indrindra ny ankizivavy) mahazo be dia be ny hafatra. Ka ny anao fotsiny dia mety very. Toy ny tovovavy eo amin’ny sary dia mety hampahatsiahy anao ny bibidia saka na ny Andriambavy, dia tsy ilaina ny mampahafantatra ny momba izany ao amin’ny lahatsoratra voalohany. Mba hahitana — na dia eo amin’ny toerana manokana — karazany teny sy ny firaiketam-po dia tsy mendrika. Ny toerana sy ny Mampiaraka asa mamorona ny heviny lehibe kokoa ny safidy. Ary noho ny fiheverana fa ny ankizivavy misy ao amin’ny fitsipika mandray kokoa ny hafatra noho ny olona, amin’ny farany dia ny mitsangana avy. Fahamarinana ny herisetra: ny iray hafa «hi, manao ahoana ianao» dia tsia ny valiny, ary ny fitsipika mahakivy na fakàna am-bavany rehetra, ny filan-dratsiny hanohy resaka.
Ho voafaritra kokoa
Mba hamely ny olom-pantatra, dia ampiasao ny fanazavana voalaza ao amin’ny mombamomba ny zazavavy, na mifidy ny tsy mahazatra ny lohahevitra momba ny resaka. Ohatra, tolotra mba hizara ny adala tantara na milaza ny momba ny tena tsy mahazatra ny nofy. Noho izany dia hisarika ny saina, sorohina ny fanontaniana mandreraka sy ketraka ny ranomandry. Ny olona sasany, reraka ny scribbling an-jatony tonga soa hafatra, manapa-kevitra ny ho tonga amin’ny anankiray: lehibe, amin’ny antsipiriany sy zavatra maro. Izany, farafaharatsiny, mihevitra izy ireo. Raha ny marina, ny lahatsoratra, mila asehontsika amin’ny tsirairay fitsaboana no hita avy hatrany ary na dia tsy mahaliana. Ny toro-hevitra dia tsotra: manapa-kevitra hoe karazana vehivavy mitady, maka ny fotoana mba hifidy mety kandidà sy ny fifandraisana izy ireo, fara fahakeliny, indray, fa velona ny andian-teny. Raha ilaina, ny fomba fitsaboana avereno. Toy ny hoe mandeha, ny fikarohana sy ny fifandraisana. Mazava ho azy, ny sasany ny tolo-kevitra rehetra izao: ao amin’ny Tambajotra mila mijanona ho fanajana eo amin’ny tena fiainana, dia tokony hanaraka ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ny teny. Misy ny roa hafa maimaim-poana olana-amin’ny fomba, miara-miasa amin’ny toe-javatra misy: mamirapiratra vazivazy ary angataho ny ankizivavy fanontaniana, dia toy izany no mampiseho ny liana
← Video chats
Maimaim-poana rosiana ny lahatsary amin'ny chat "Mpanadala Mampiaraka" tsy misy fisoratana anarana →